SingForYou.net - Chit Tat Thu Tway
Chit Tat Thu Tway
Tags : 101-Chit Tat Thu Tway-KoBurma
By : KoBurma on Jul 22, 2009
Score: 100 Rating: 5.00 Comments: 42
Chit Tat Thu Tway's Description
အခမဲ့သင်တန်းပေးသည်… ဆက်သွယ်ရန် KoBurma Phone:ဘလာ ဘလာ ဘလာ ဘလာ….
lonepu on Apr 30, 2010 0
melvinvampire on Mar 27, 2010 0
so good.; u will be the best
Rosies on Mar 18, 2010 0
superman on Aug 28, 2009 0
superman lal ..chit tet tal..pyaw pay nor.... nice singing 5*4u
KoBurma on Feb 25, 2010 0
________´$$$$`_____________________________,,,_______ _______´$$$$$$$`_________________________´$$$`______ ________`$$$$$$$`______,,________,,_______´$$$$´______ _________`$$$$$$$`____´$$`_____´$$`____´$$$$$´______ __________`$$$$$$$`_´$$$$$`_´$$$$$`__´$$$$$$$´______ ___________`$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_´$$$$$$$´_______ ____________`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$`´$$$$$$´________ ___,,,,,,______`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_________ _´$$$$$`____`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_________ ´$$$$$$$$$`´$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´__________ ´$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´__________ ___`$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$´__________ ______`$$$$$$$$$$$$$_$$$$$__$$_$$$$$$_$$´___________ _______`$$$$$$$$$$$$,___,$$$$,_____,$$$$$´____________ _________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´____________ __________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_____________ ____________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´______________ _______________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_______________
moegyi on Jul 23, 2009 0
good song and voice...း ချစ်တတ်ပါတယ်...(အုန်းခြစ်)..:P
KoBurma on Jul 23, 2009 0
ဒါလည်း မိန်းခလေးတွေ ကြိုက်တဲ့ မဟာအစွမ်းပါပဲ… သူတို့ လေးတွေက အုန်းနို့ ခေါက်ခွဲတို့ ။ အုန်းနို့ ကျောက်ကျောတို့ ဆို အလွန်ကြိုက်ဗျို့ …ဟဲဟဲ… ကျေးဇူးစ်ပါ ကိုမိုးဂျီး...:):D:P
maureen on Jul 23, 2009 0
အခမဲ့ သင်ပေးတဲ့ ဦးဗားမား :P... စာသင်ဆောင် တစ်ဆောင် ငှားစရာရှိတယ်....ငှားချင်ရင် တော့..maureen address- ဘလာ ဘလာ ဘလာ...ဟီးဟီး....အရမ်းကောင်းတယ် ဦးဦးဗားမား....အားပေးနေပါတယ်....၅စတားလ်ပေးလိုက်ပြီနော်...
ဝမ်းသာရမှာလား ဝမ်းနည်းရမှာလား…??? maureen စတားစ်ပေးလို့အားပေးလို့ဝမ်းသာတယ်…ဦးဦးခေါ်လို့ဝမ်းနည်းတယ် ဟွန့် ဟွန် … ကျေးဇူးစ်ပါ Sis maureen ...:):D:P
maryaung on Jul 22, 2009 0
ဒီလိုလည်းဖြစ်တာပါပဲလား....ဆိုလည်းဆိုတတ်ပါပေတယ်.. သင်တန်းတော့နောက်တသုတ်မှပဲတက်တော့မယ်... လူပြည့်သွားပြီဆို....အခုတော့ ..သင်တန်းကြေးပဲအရင်ပေး ခဲ့တော့မယ်....ရော့.ရော့..ယူထားလိုက်..ပိုတာပြန်မအမ်းနဲ့တော့ ****************************************
တယ်ဟုတ်ပါလား သင်တန်းကျေးတောင် ကြိုပေးမယ်ဆိုပါလား…သူ့ အသံဆန်းလေးကိုကြိုက်လို့စတိသဘော ၁၅၀၀ ပဲယူလိုက်ပါ့ မယ်… ကျေးဇူးစ်ပါ Sis maryaung
SCH7677009 on Jul 22, 2009 0
GOOD PAR TAE MY DEAR BRO KYI YAR...
Thanks par "GOOD PAR TAE MY DEAR BRO KYI YAR...":):D:P
forevermoe on Jul 22, 2009 0
chit thu shi chin p so tot ..tin tan that mha nae thu tal...UU Burma yay thin pay par lar ..:P so nice par 5******4u
စိတ်ချ Sis forevermoe ရေ ကိုးရီးယားနည်းနဲ့မရရင် တရုတ် သိုင်းကားမင်းသမီးလေးတွေလို လက်ရုံးရည်နဲ့ ကြိုးပမ်းနိုင်အောင် တရုတ် ကွန်ဖူးပါသင်ပေးဦးမှာ… ကျေးဇူးစ်ပါ Sis forevermoe :):D:P
snowwhite2000 on Jul 22, 2009 0
ဟုတ်လား ချစ်ရင်အသက်ရှည်လား သင်ပေးပါလား
စိတ်ချစိတ်ချ ရှည်ကိုရှည်စေရမယ်…အသက်အသက်…ကျေးဇူးစ်ပါ snowwhite2000:)
philtre on Jul 22, 2009 0
မြို့စားမင်းရာ...ကိုယ့်အသက်ရွယ်.. ဂုဏ်ကိုမှ မထောက်.. ဒီလို ကလေးကလား သင်တန်းဆရာလုပ်စရာလား...မြို့စားကြီးဘာသာ ကတော်ကြီးကို စောင်းတီး .. ပေးနေ.. :p .. သွပ်.. တပည့်ကျော်တာဝန်သာထား... သင်တန်းသူလေးတွေကို လက်ထပ်ပြီးတော့ကိုသင်ပေးမှာ... သင်တန်းသားလုံးဝလက်မခံပါ... အားကျလို့လိုက်ဆိုအုံးမယ်...း)
မောင်သွပ် ကျွန်ုပ်က ဂန္တ၀င် ကိုးရီးယား မိန်းမနောက်ပိုးဇာတ်တွေ ကို သင်ရိုးညွှန်းတန်းလုပ်မှာမို့ မောင်မင်းကိုစိတ်မချဘူး…မောင်မင်းတာဝန်ထမ်းချင်ရင်တော့နောကြာစေ့ ခွံ အချဉ်ထုပ် အမှိုက်သိမ်းအလုပ် လုပ်ကွယ့် …ငှဲ ငှဲ ငှဲ…
9naing on Jul 22, 2009 0
ကိုဗားမာ....မမေမျိုး ကပြောတယ်ဗျ....အကူအညီတောင်းပါတဲ့..ဟဲဟဲ....သီချင်းနာထောင် ပြီး အကူအညီတောင်းဖို့တောင် မေ့သွားတယ်....ကောင်းတယ်။။ ကောင်းတယ်။။။
KoBurma on Jul 22, 2009 0
ညီလေးရေ 9naing မေ့ လက်စနဲ့ သာ ဆက်မေ့ လိုက်တော့ ကွာ…ငြင်းရမှာအားနာလို့ …့ မိန်းကလေးတွေနဲ့ လူပြည့် သွားပြီကွ…ဟက်ဟက်ဟက်စ်…… ကျေးဇူးတင်ပါတယ်… ညီလေး 9naing ...:):D:P
Maung_Than on Jul 22, 2009 0
ko gyii koburma yay nyi lay ka chit tat par dal.But bal thu mha ma chit kya buu bya. kuuu nyiii par own naw.ha ha........***** from me too.
ညီလေး မောင်သန်းရေ စိတ်မရှိပါနဲ့ ကွာ…အစကတော့ လူဦးရေ အကန့် အသတ်မရှိပါပဲ…ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးတွေနဲ့ လူပြည့် သွားပြီကွ…ဒါပေမယ့်မင်းကိုအကြံတခုပေးမယ်…မင်း ကိုရီးယားကိုသွား… ကိုရီးယား မလေးတွေက မြန်မာမလေးတွေလိုမဟုတ်ဘူးကွ…အနေအထိုင်အရမ်းတတ်တာ…မင်းမချစ်တတ်ရင်တောင်…သူတို့ ကမင်းကို ဝိုင်းချစ်ကြလိမ့် မယ် (ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းကြည့် ဖူးသူတွေသိကြ၏…)…ရှလွတ်… ကျေးဇူးတင်ပါတယ်… ညီလေး မောင်သန်းရေ
brownlay on Jul 22, 2009 0
Very Good, but "Ba Lar, Ba Lar, Ba Lar, Ba Lar" so dar ka students twae khaw nay dar lar? :P Just kidding ***** for you!
ကျေးဇူး မညိုလေး…အဲဒါနောက်ဆုံးပေါ် ကျွန်တော်တို့ လို လူငယ်လေးတွေ သုံးတဲ့ စကား……ဟက်ဟက်ဟက်စ်…
susannyunn on Jul 22, 2009 0
boe boe g..." ma chit tat loz tot hut woo kwar,,,achit ngat loz ywar lel kel tar,,dlaw ki thar mo shaung lwel yan kat loz ta khar ta lay marr kel tar,,,, yone kyi p tot min thar pyan chit yin..koe thittsaramyan sone khine mar say mar..." hahhahaha ... song so tar naw ( ta mo ma htin nelz naw arr ko g).... hehe
အမယ်လေး…ဆူဆူညံဂွိ…လူကို နာမည်ဖျက်လို့အားမရလို့Burmeselish နဲ့ နှိပ်စက်ပြန်ပြီ…ဒီမှာပါဝါတွေတက်တော့ မယ်……ဟက်ဟက်ဟက်စ်……ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…ဂွိလေး
pp01 on Jul 22, 2009 0
Before you teach others, make sure you know the whole love bible first for yourself:P:P,,hee..hee.. (kidding) taw lite tar Professor Love.*****
မမပီပီ…မူရင်းသီချင်းကိုနားထောင်ကြည့် …မမပီပီ အသံနဲ့ တော်တော်တူတယ်…တကယ်ပြောတာ……ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Pretty ပီပီ…:):D:P
mayyu on Jul 22, 2009 0
ရတယ်သင်တန်းပေးစရာမလိုဘူး တို.ကချစ်တက်ပြီးသား 5* နော်
သူ့အသက်ရွယ်ကြီးနဲ့.. မမယုတဲ့... တွေ့သမျှ မိန်းခလေး မမစွတ်ခေါ်နေတယ်... မြို့စားရောဂါ.. ဇီဝက မနိုင်တော့ဝူးးး.. ယုလေးရေ... ဒီလို ကြောတာတော့ သွပ်သွပ် မခံဘူး.. ယုလေးပဲ........... ပြန်ရန်တွေ့လို့... ဟိဟိး)
ကြွားနိုင်သူတွေ… ကြွားကြပါ...ကြွားကြပါ…ကြွားနိုင်ခွင့်မရှိတော့ …ဟွန့်… ဟွန့် … ဟွန့် …:):D:P...…ဆံပင်တုကြီးနဲ့စွံသားပဲ……ဟက်ဟက်ဟက်စ်… ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…မမယု…
Taw_Thar_Lay on Jul 22, 2009 0
Chit tat par del. ***** :)
ကြွားနိုင်သူတွေ… ကြွားကြပါ...ကြွားကြပါ…ကြွားနိုင်ခွင့်မရှိတော့ …ဟွန့်… ဟွန့် … ဟွန့် … :):D:Pကျေးဇူးတင်ပါတယ်…ကိုတော…
shwezin888 on Jul 22, 2009 0
Ahar...dar so myan2chit that aung ,kyite that aung Aba c go ohn mhar bal...Hello ...aba sa yin pay ma lo bar ,aww... luu payebhote lar , dar so nout mha bal lar dop mal ^_* Aba toe mer bar so so good bal. good....good....D nay him kg loaser mer twar tal...good ^_^5*4u
အခမဲ့ လူဦးရေ အကန့် အသတ်မရှိ သင်တန်းပါရွှေဇင်…(ဆရာနာမည်ပျက်စေမည့်ဂေါ်မစွံ ဟိုလူကြီး ၂ ယောက် မပါ)… ဟက်ဟက်ဟက်စ်… ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမ ကျဲ့ ကျဲ့ရွှေဇင်…
greenlay on Jul 22, 2009 0
မြို့စားကြီးရေ ... ကောင်းမှကောင်း , ၅ စတား ပေးခဲ့ပြီနော် ၊ အခမဲ့သင်တန်းကြေးက " ဆန်တစ်ပြည်နဲ့ငွေတစ်မတ် " ဆိုပါလား :D
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမ …။ မစိမ်းလေးက အသံလေးကောင်း သလောက် သဘောကလည်း အလွန်ကောင်း၏။…အဘိုးကြီးမခေါ်လို့ … ဟက်ဟက်ဟက်စ်…
zezawar on Jul 22, 2009 0
Byo....a phoe gyi!! This one is also nice!
အသံလေးကောင်းသလောက် ရက်စက်လိုက်တာ… လူကို နစ်နစ်နာနာခေါ်သွားတယ်…အဘိုးကြီးတဲ့ …စတာပါကွယ်…ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမ ဇီဇာကြောင်…ရယ်…ဟက်ဟက်ဟက်စ်
winwinthant on Jul 22, 2009 0
သြော်..ဒါကြောင့် ဘိုးဘိုးဗားမားက အသက်ဒီလောက်ရှည်နေတာကိုး.......ကောင်းးပါပေတယ်...အဆိုရောအသံရော...ယူလိုက်ပါ ၅စတား.........
စတားစ် ၅လုံးနဲ့ တန်အောင် လူကို နစ်နစ်နာနာခေါ်သွားတယ်…အဘိုးကြီးတဲ့ …:):D:Pစတာပါကွယ်…ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သမီးလေး ဝဝသန့် ...
Feedback : 42